airzimbabwe.aero - Plan & Book | Air Zimbabwe
Provided by Alexa ranking, airzimbabwe.aero has ranked N/A in N/A and 7,367,259 on the world. airzimbabwe.aero reaches roughly 418 users per day and delivers about 12,552 users each month. The domain airzimbabwe.aero uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 197.211.237.104 and it is a .aero domain.
List of domain same IP 197.211.237.104
air zimbabwe flights to johannesburg
air zimbabwe history
air zimbabwe scandal
air zimbabwe background
air zimbabwe flights to tanzania
Search Results related to airzimbabwe.aero on Search Engine
Book with Air Zimbabwe - Flights Reservation - Expedia
At Expedia, booking your Air Zimbabwe tickets is super simple – and you have the added bonus of being able to bundle your Air Zimbabwe flights with accommodation and car hire to save money on your trip. …
Destinations | Air Zimbabwe
DA: 30 PA: 14 MOZ Rank: 73
Who is the owner of Air Zimbabwe Airlines?
The company has been a member of the International Air Transport Association, and of the African Airlines Association since 1981. As of July 2014 , it is owned by the Government of Zimbabwe. An Air Zimbabwe Boeing 707-320B on final approach to London Gatwick Airport in 1989.
Where does Air Zimbabwe fly in and out of?
Air Zimbabwe is the national airline of Zimbabwe and is based at Robert Gabriel Mugabe International Airport (Harare International Airport) (IATA: HRE). The airline's full name is Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, and currently operates mainly domestic and regional flights around Zimbabwe.
DA: 100 PA: 53 MOZ Rank: 76
How much money does Air Zimbabwe have in debt?
, Air Zimbabwe's debts were estimated to be US$330 million. On 8 June 2018, it was reported that Air Zimbabwe has debts of more than $300 million and can no longer fly to most destinations due to threats by debtors to impound its aircraft.
How many employees did Air Zimbabwe have in 1985?
By March 1985 (1985-03), Air Zimbabwe had 1,443 employees and the fleet comprised five Boeing 707-320Bs and seven Viscount 700s.
airzimbabwe.aero TXT IN 300 Txt: v=spf1 include:mx3.ai.co.zw include:mx4.ai.co.zw include:mx1.ai.co.zw include:mxgw.ai.co.zw -all
Entries_0: v=spf1 include:mx3.ai.co.zw include:mx4.ai.co.zw include:mx1.ai.co.zw include:mxgw.ai.co.zw -all
airzimbabwe.aero SOA IN 300 Mname: madagascar.ai.co.zw
airzimbabwe.aero NS IN 300 Target: ns4.ai.co.zw
airzimbabwe.aero NS IN 300 Target: ns1.ai.co.zw
airzimbabwe.aero MX IN 300 Pri: 0
airzimbabwe.aero A IN 300 Ip: 197.211.237.104